Kooxda Khaatumo-xun ee Daba Gorasta Jwxo-shiil, oo Dawliskii u Go,ay – Rasaasa News
Dec 24, 2009 Ina Dhuubo, Jwxo-shiil
Jwxo-shiil, oo Ina Dhuubo dhagta ugu sheegay in uu gacanta ka dhunkdo waftigii Itobiya ee ka qayb galyayey shirkii caalamiga ahaa ee cimilada aduunka, oo afka ka dhiigay kolkii ay fara gorgor la beegsadeen qaar ka mid ah wafiga Itobiya.
War xog ogaal ah oo aan ka helay dalka Denmark, ayaa sheegay in murtad Jwxo-shiil, uu u sheegay Ina Dhuubo in uu si hoose ula kulmo waftiga Itobiya ee yimi dalka Danishka si ay uga qayb galaan shirka cimilada caalamka oo ka dhacayey Kobenheygan.
Ina Dhuubo oo intii uu shirku socday abaabulay qaar ka mid ah dadka aan wali fahmin kooxda khaatumo-xun oo iyagu si xun u huwada calanka ummda Somalida Ogadeeniya. Waxaa uu si khaldan oo ayna fahmaynin dhaxan ugu dilay meel caalamka oo dhan isugu yimid oo canlanka Ogadeeniyaba loo qaatay in uu yahay garbosaar dhaxanta la isaga dhigo.
Ina Dhuubo, waxaa uu isagu ku hawlanaa sidii uu u heli lahaa qaar ka mid ah waftiga si uu u helo fursad uu ugu dhiibo waftiga warqad. Waxaa isaga la socday laba nin oo u shaqeeya Kaalinka 5aad kana tirsan baarlamaanka Kaalinka 5aad, kuna nool Denmark. Labada nin oo uu Ina Dhuubo la socday ayaa xili habeen ah waxay damceen in ay la kulmaan qaar ka mid ah waftiga si uu Ina Dhuubo warqada ugu gudbiyo.
Sida ay wararku sheegayaan, Ina Dhuubo ayaa la waydiiyey inta aan warqada laga qaadin waxa ku qoran, waxana uu yidhi Ina Dhuubo “waxaanu diyaar u nahay in aanu Itobiya la galo wadahadalo shuruur la,aan ah”.
Xubnihii waftigu waxay u sheegeen Ina Dhuubo, in ayna wax wada hadal ah la galaynin dawlada Itobiya kooxda Jananka, madaama uu yahay Janan Somaliyeed oo si sharci daro ah u laayey burburiyeyna dad iyo hanti badan oo ay lahaayeen dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa kale oo ay xubnaha waftiga Itobiya u sheegeen Ina Dhuubo in ay heshiis la gali lahaayeen Dr. Dolal hadii uu noolaan lahaa uuna codsan lahaa heshiis, laakiin bay yidhaahdeen ayna jirin cid kale oo aan u aqoonsanahay in ay tahay masuul ONLF, wuxuu yidhi nin waftiga ka mid ah “waxaad tahay taliyihii ugu horeeyey ee Booliska Kilalka, aniguna waxaan ahaa turjubaanka Kilalka ee xiligaasi, labadan nin ee kulasocotana waa niman xiligan ka tirsan baarlamaanka Kilalka, hadana Denmark ayaad ku wada nooshihiin aadna saaxiib tihiin, marka kuligeen isku mid ayeynu nahay, hadaad dambi dalka ka gashayna maxkamad ayaa cadayn”.
Sidaasi ayaa isaga oo aan la ogaan, oo caloosha ka leh malaha hadaad Itobiya tagto cidi wax ku yeeli maso ayuu dib ugu soo laabtay gurigiisii kiiyoo aan warqadii laga qaadin.
Way ogg tahay ummada Somalida Ogadeeniya Jwxo-shiil dhiig jago ku doon oo ujeedadiiu ahayd in uu maruun Itobiya jago ka helo, taas oo uu bil ka hor ka sheegay TV UNVERSAL in uu doonayo jago iyo madaxtinimo. Ina Dhuubana waa kolba ruuxii u dambeeya, kitaab laawe ayna sagaaro ka biirsan oo maalina Kaalinka 5aad u shaqeeya maalin Eritrea. Waxaan laga war hayn in uu Qaaxo la qabo qar iska xoornimada iyo qolod u galka Itobiya.
Ugu dambayn waftigu waxay waydiiyeen Ina Dhuubo iyo labadii nin ee keenay in ay ka midaysan yihiin heshiiska garabka uu hogaamiyo Eng. Salahdin Cabdiraxmaan Xaaji Macow.
Ina Dhuubo ayaa ka cadhooday, magaca Eng. Salahdin kolkii uu maqlay, caytamayna, waxaana far goror ku dhuftay nin ka mid ah waftiga oo Somali ah oo ku yidhi idinkaa heshiin waayey kolkaas ayaad anaga heshiis naga dooni.
Ururka ONLF oo Soo Dhaweeyey Cunaqabataynta Golaha Amaanku Saaray Dawlada Eritrea.